Nezvedu - Hong Bang Packaging Co., Ltd.
Hong Bang Kupakata Co, Ltd.
yakagadzwa muna 2000, inogonesa mugadziri muChina achishandisa epurasitiki-yekudhinda uye yekumonera inoshanduka yekutakura zvinhu, vacuum metallized mafirimu uye akawanda-anoshanda mafirimu.
Zvigadzirwa zvedu zvinofukidza chikafu, zvemakemikari ezuva nezuva, mishonga, agrochemicals, zvemagetsi, zvekuvakisa uye mimwe minda. Iye zvino tine matavi matatu, Hong Bang (Hong Kong) Packaging, Hong Bang (HUIZHOU), iyo yese inonakidzwa nekuwana mukana wekufambisa kuenda kuHong Kong neShenZhen port.
Fekitori yedu iri muHuiZhou.
Kugamuchirwa kushanyira musangano wedu weGuruva-isina.
Fekitori yedu inosangana neyakajairika michina uye otomatiki. Vashandi vedu kuburikidza nehunyanzvi hwekugadzira kugadzirwa, vanonyatsoteedzera ekugadzira matanho ekushanda. Iye zvino kambani yedu yakashongedzwa neanopfuura makumi masere emitsara yekugadzira anosanganisira gumi nemana-mavara maprinta, emhando-yekumhanyisa laminators, mabhegi ekugadzira michina uye akawanda-anoshanda emuchina wekutora.
More Mifananidzo Fekitori
Isu tinoteerera kwazvo ISO9001, ISO14001 uye ISO22000 manejimendi sisitimu, isu takawanawo BRC, FDA uye 63 patents. Isu tinopa mapakeji mhinduro, dhizaini uye tinogadzira akasiyana siyana mavara akajeka ekudhinda ekurongedza zvigadzirwa. Sezvo isu tichitenda kuti hunyanzvi huchaunza ramangwana rakajeka, tiri kuzvipira pachedu kuumba yakakura yekutsvagisa uye yekuvandudza chikuva uye hi-tech maindasitiri hwaro hwegreen package zvigadzirwa, kuburikidza nekudzika kubatana pamwe neakawanda masayendisiti ekutsvagisa masangano kuChina nekunze makambani anozivikanwa ekupakata. Yakazvitsaurira kune yakasimba yemhando yekudzora uye inofungisisa vatengi, vedu vane ruzivo vashandi vevashandi vanogara varipo kuti vakurukure zvaunoda uye nekuona kugutsikana kwako. Kunyangwe odha yako iri diki kana hombe, yakapusa kana yakaoma, ndapota usazeza kutaura nesu. Sevhisi yakanaka uye kugutsikana mhando inogara uinewe.